डडेल्धुरामा राष्ट्रियस्तरीय खेलमैदानको निर्माण शुरु – Sulsule
सुलसुले २०७७ कात्तिक २१ गते १६:१६ मा प्रकाशित
डडेल्धुराको अजयमेरू गाउँपालिका–३ चनबेतालमा राष्ट्रियस्तरको खेल मैदान (रङ्गशाला) को निर्माण शुरु भएको छ । जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिस्तरका खेलकूद प्रतियोगिता एकै स्थानमा आयोजना गर्न सक्ने गरि खेल मैदान निर्माणको शुरुवात गरिएको हो । राष्ट्रियस्तरको खेल मैदान निर्माणको शुरुवात भएसंगै स्थानीयवासीमा खुशियाली छाएको छ ।
करिब रु. २० करोडको लागतमा वहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत निर्माण हुन लागेको सो राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान १५० मिटर लम्वाइ र ८० मिटर चौडाइको हुनेछ । यो मैदान निर्माणका लागि गत दुई आर्थिक वर्षमा रु. ४० लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गुरुयोजना अनुसार गाउँपालिकाले खेलमैदान निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु. ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको र केही दिनमै मैदान निर्माणको काम शुरु हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले राससलाई जानकारी दिए । अहिले मैदान सम्याउने काम भइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा नै पर्खाल लागउने काम पनि सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार खेलमैदानमा प्याराफिट लगाउने, स्वीमिङ पुल, शौचालय, कर्भड हलसहित विभिन्न भौतिक संरचना पनि निर्माण गरिने छ । ‘एक वडा एक खेलमैदान’को अवधारण अनुसार बाँकी वडामा पनि खेलमैदान बनाउने काम शुरु भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । खेलकूद क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै गाउँपालिकाले पाँच जनालाई खेल प्रशिक्षकको रुपमा चयन गरेको छ ।